တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: February 2013
တစ်ခါတရံ ဖွဲ့စည်းပုံ မတူတဲ့ စိတ်ဟာ
အဲဒီ စိတ်ကို ဖွင့်ဟဖို့
အသိ တံခါး တစ်ချပ်
အသိတရားနှင့် ကိုယ့် စိတ်ကို ဖွင့်ဟလိုက်ပါ
တင်းကျပ် မွန်းကျပ် မနေပါနဲ့
ခက်ခဲလွန်းတဲ့ အမှောင်ထုထဲက စိတ်ကို
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:58 AM No comments:
ရာသီတွေ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲ
နွေ မိုး ဆောင်း သုံးရာသီထဲ
နှစ်တွေ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကုန်ဆုံး
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် ရင့်ကျက်မှု မရှိပဲ
အပေါ်ယံ သကာရည် အကြိမ်ကြိမ် လောင်းထားပေမဲ့
ဘယ်ခေတ်တွေ ဘယ်လို ပြောင်းလဲ ပြောင်းလဲ
ခေတ်အဆက်ဆက် စီးဆင်းနေတဲ့ ပင်လယ်ဟာ
အားလုံးအတွက် အရသာ တစ်မျိုးတည်း ရှိတယ်....။
အရသာ တစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့ ပင်လယ်
မတွေ့ဖူး သူ အတွက်တော့
ကြည့်လိုက်ရင် လိုချင်စရာတွေ များပြား
တကယ်တော့ အတွေးနဲ့သာ မျောသွားတဲ့
တောင်းဆိုမှုများ ရုတ်တရပ် စဉ်စားကြည့်တယ်...။
အပြုံး ကျက်သရေတွေ သယ်ဆောင်လို့
ကိုယ့် မရှိတဲ့ နံရံမှာ သုတ်လိမ်းကြမယ်ဆိုရင်...။
ကိုယ် ထင်ထားတဲ့ ဈေးထက် မြင့်တက်
ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ခွန်အားတွေ ဆုတ်ယုတ်
ဘယ်အချိန်များ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဈေး ဖြစ်နိုင်မလဲ
လိုရ မယ်ရ ရှာမတွေ့တော့ပါလား....။
စက္ခူနှစ်ကွင်းထဲ မြင်လိုက်တဲ့ သားကောင်တိုင်း
လေးတော်တင် နားနှစ်ဖက်နှစ် နားစဉ်ရင်း
ရနံ့သင်းသင်း အနံ့တစ်ခုက ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ခဲ့
အရသာ မသိတဲ့ ထူလွန်းတဲ့ လျှာတွေလည်း
အထိအတွေ့တိုင်း ခံစားမြဲ ခံစားနေဆဲ....။
ကိုယ် တည်ဆောက်တဲ့ အိမ်ထဲ
နှစ်တွေ ကြာလာတော့ ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲ
ယက်မတွေက မခိုင် တိုင်တွေက ယိုင်
ဟိုနား ပေါက် ဒီနား ပေါက်
ယိုချင်တိုင်း ယိုနေတဲ့ အမိုး
ပေါက်ပြဲချင်တိုင်း ပေါက်ပြဲနေတဲ့ နံရံ
ကျိုးချင်တိုင်း ကျိုးနေတဲ့ အခင်းများက
အားလုံး လုံခြုံမှု မရှိတော့.....။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 5:49 PM 1 comment:
ဘဝ သင်္ချာအတွက် ပေတံ တိုင်းမှာ
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အတိုင်း အထွာ ရှိသလို
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အတိုင်း အထွာ ရှိတယ်...။
ကိုယ့် အတိုင်း အထွာတွင်းမှာ
ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ကြတာ သဘာဝပဲလေ...။
ကိုယ့် ခင်းကျင်းတဲ့ ဇာတ်ခုံထဲ
ကိုယ့် ဇာတ်ကောင်တွေကို မူမှန် လမ်းမှန်နဲ့
ဘဝမှာ မမှားဖူးတဲ့ သူမရှိကြဘူး
ပြင်လို့ မရတဲ့ သူလို့ ပြောနေမည့်အစား
သူ အမှန် ကိုယ် အမှန်နဲ့
ဘောင်နှစ်ခု ခတ်ထားတဲ့ မြစ်တစ်စင်းထဲ
ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ...။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:27 PM2comments:
ထက်စကြာဝဠာထဲ ခံစားချက်တွေ ခရီးသွားရင်း
ခလုတ်တိုက်မှ ထိခိုက်တတ်တဲ့ ဒဏ်ရာတစ်ခုက
စုံမှတ်တို့ ခင်းကျင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ
ဟန်ပါပါ မာန်ပါပါ တက်ရောက်နေပါလား....။
အပြန်အလှန် မေးခွန်းတွေ စီးဆင်း
အထင်ကရ ရုန်းထလာတဲ့ သစ်ပင်မှာ
အသီးအပွင့်တို့ လှလှပပ ဖူးပွင့်နေတာ
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မသိခဲ့ဖူးပေမဲ့
အမှတ်တမဲ့ အပြန်အလှန် ဖြေဆိုခဲ့တဲ့
နှင်းကလေးတွေ ငိုနေတဲ့ ဆောင်းမှာ
ကာရံမညီညာသော ကြယ်တွေ လင်းလက်
မှေးစက်နေတဲ့ ငါ့ အသိများက
ကိုယ်တိုင် သူ့ကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတာ
အခန့်မသင့်ရင် ချောင်းဆိုး ရင်ကျပ်တတ်တယ်
အနိုင် အရှုံး ပိဿာ အလေးချိန်ဆိုတာ
ကိုယ် စိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ လူရဲ့ အတွင်းပိုင်းကလာတဲ့
ဘဝရဲ့ လက္ခဏာ ကြီးငယ်အောက်က
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:43 PM No comments:
၁၉၄၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်းဂါးမြို့မှာ ကျင်းပသော အိန္ဒိယ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းဝေးသို့ သူ တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ ဗြိတိသျှတို့ကို သခင်တို့က ပုန်ကန် အားထုတ်သဖြင့် သူ့ကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အတွက် ရှောင်တိမ်းနေခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးတော့ နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ အစောပိုင်းက သူသည် တရုတ်ပြည်သို့သွား၍ တရုတ်ကွန်မြူးနစ်တွေဆီ အကူညီတောင်းရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ဂျပန်စစ်တပ် ပြည်သိမ်းတပ်များက သူ့ကို အမွိုင်မြို့တွင် ကြားဖြတ် တားဆီးပြီး ဂျပန်ပြည်သို့ သွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် သူသည် ဂျပန်မှ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ဖူမီမာယိုကိုနိုး အစိုးရဆီက လက်နက်နှင့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မည်ဆိုတဲ့ ကတိကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စစ်သင်တန်းတက်ဖို့ရန် ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင်တွေနှင့်အတူ ဂျပန်ပြည်ကို ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၂ ခုနှစ် မတ်လမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အင်္ဂလိပ် လက်အောက်သို့ ရောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ရန်ကုန်သည် ဂျပန်၏ လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် သူသည် ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသော ခေတ်သစ်ဆရာဖြစ် သင်တန်းတွင် သေနင်္ဂဗျူဟာ အကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ဂျပန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံအား အတုအယောင်ဖြစ်သော အကာလှပသော ရွှေရည်စိမ် လွတ်လပ်ရေးကို ကြေငြာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စစ်ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး သူ၏ တပ်မတော်ကိုလည်း ဗမာ့ အမျိုးသား တပ်မတော် (B.N.A) Burmese National Army ဟု ပြောင်းလွဲ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော် ဂျပန်တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မဟာမိတ် ပြုလုပ်မှုကတော့ ရေရှည် ကြာကြာမခံပါ။ နောက်ပိုင်း သူသည် ဂျပန်များပြောသော လွတ်လပ်ရေးကို သံသယဝင်လာသည့် အပြင် ဗမာပြည်သူ ပြည်သားတွေကို ဆက်ဆံသည့် အပြုအမူတွေကိုလည်း မနှစ်မြို့ခဲပါ။ ဂျပန်တပ်များ မဝင်ရောက်ခင် ဖက်ဆစ်တို့၏ ရန်စွယ် အန္တရာယ်တို့ကို ကြိုတင် သတိပေးခဲ့သော ဗမာ့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်များဖြစ် ကြသည့် ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ သခင်စိုးတို့၏ အကူညီဖြင့် သူသည် ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား တိုက်ထုတ်ရန် အန္ဒိယပြည်ရှိ ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များနှင့် တိတ်တဆိတ် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး လျှိုဝှက်အစီစဉ်များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:52 AM No comments:
Labels: သမိုင်းစာအုပ်စဉ်, အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါး, ဆောင်းပါး
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 10:31 PM 1 comment:
ခုနှစ်တွေ ဖြတ်သန်း နေ လတို့ ကျက်စားနေတဲ့
အချိန် နဂါးကြီးက နိုးကြားလို့
ထောင်ကိုးရာတစ်ဆဲ့ငါး နေ့ရက်က ထူးခြား
စနေသား သူ့ကို အမေက မွေးခဲ့တယ်...။
ကျောင်းသင်္ခန်းစာနှင့် သမိုင်းတွေ ဖတ်ဖူးခဲ့ပါရဲ့
ဖတ်ဖူးတဲ့ စာမျက်နှာကို အမှောင်ချလို့
တယူသန် အသိစိတ်တွေနဲ့ ဘိတ်သိပ်ခံခဲ့
ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ ခြေရာတွေက
ကျောနောက် တစိမ့်စိမ့် ထိရှနေခဲ့ပေါ့...။
စိတ်ကြမ်း လူကြမ်းနဲ့ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားကို မွေးဖွားလို့
အမှားအတွက် တုန့်ပြန်ချက် များတယ်
အမှန်တရားအတွက် ဖိအားပေးမှု များတယ်
မထင်ရင် မထင်သလို တိုက်ခိုက်
ခံစားချက် ပြင်းပြ ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝ
လေတိုက်မှ လှပလာတာမှ မဟုတ်တာ...။
မုန်သုန်လေ ဖိအားနည်းတဲ့ လေဟာနယ်ထဲ
အဲဒီနေ့ကစပြီး သူအတွက် ငါတို့ မိုးတွေရွာနေခဲ့တယ်
အားလုံးရဲ့ ပါးပြင်မှာ နှင်းစက်တွေ စီးကျလို့
အားလုံးရဲ့ နှလုံးသားထဲ အိုင်တစ်ခုဖြစ်လို့
ဘဝဆိုတဲ့ ဖခင်ရဲ့ သွေးသောက်တွေ
နှလုံးသား အသည်းစိုင်မှာ ဖုံးလွှမ်းလို့
ငါတို့ သမိုင်း မျက်နှာစာမှာတော့
သူဟာ ငါ့တို့ရဲ့ အနုပညာ ဗိသုကာကြီးပေါ့...။
ယနေ့ထိတိုင် ငါတို့ မြတ်နိုးလွန်းလို့
ငါတို့ နှလုံးသား ကြေးမှုံပြင်မှာ
သူဟာ ငါတို့ရဲ့ သမိုင်းဖခင်
ငါတို့ရဲ့ သခင် ငါတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပဲ...။
သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် မရှိပေမဲ့
သူ့ ရနံ့တွေက သင်းသင်း
သူ့ သတင်းက ကြိုင်ကြိုင်
ယနေ့ထိတိုင် သူ့ သံစဉ် မမေ့ပျောက်ခဲ့ပါဘူး
ငါတို့နှလုံးသားထဲက သူလိုလူ ကျေးဇူးဂုဏ်ထူး....။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:21 PM No comments:
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ နွေရာသီ မိုးရာသီ နှစ်ခုသာရှိပေမဲ့ တစ်ခါတရံ နံနက်ခင်းမှာ အအေး ဓာတ်လေးတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ညက ခေါင်းလေး နည်းနည်း ကိုက်တတ်လာလို့ စောစောအိပ်လိုက်တာ။ ဒီမနက် စောစော ချမ်းစိမ့်စိမ့် အာရုံဦးရဲ့ နေရောင်ခြည် အရှေ့လောကဓာတ်က အလင်းရောင် မထိုးခင် ကျွန်တော် နိုးကြားလာပါတယ်။
ဒါနဲ့ အခန်းအပြင်ထွက် မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ကိုယ်လက် ဆေးကျောပြီး ဗောဓိညောင်ပင်အောက် လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗောဓိပင်ရောက်တော့ ကျွန်တော် အနန္တဂုဏ ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာတို့အား အာရုံပြုပြီး ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘုရားရှိခိုးပြီး ရှိရှိသမျှ သတ္တဝါအနန္တတို့ကို မေတ္တာပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာပို့ပြီး ဗောဓိပင်အောက်က ပြန်အထွက်မှာ ကျွန်တော်နှုတ်က လောကနီတိထဲက စာပုဒ်လေးတစ်ခု….
“This World Guideline Information isadependable document of instructions. The person who is well-versed in this information is one who is full of general knowledge and well-educated.”
“ကမ္ဘာကြီး လမ်းညွန် အင်ဖောမေးရှင်းသည် လူသားတို့၏ အားကိုးစရာ ပညာပေးများ ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော သူသည် အသိပညာ ဗဟုသုတနှင့် ပြည့်စုံသော ပညာရှင် ဖြစ်သည်။” ဆိုတာကို ကောက်ရွတ်မိပါတယ်။
ဒါနဲ့ အားလုံးပြီးတော့ ကျွန်တော် အခန်းရှိရာကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်တော် ကွန်ပြူတာလေးကို ကောက်ကာ ငင်ကာ ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ စက်က အိုလွန်းလို့လားတော့ မသိဘူး ဖွင့်ရတာ နှေးလွန်းလို့ ထွေရာလေးပါး စဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်တော် ခေါင်းထဲ အတွေးတစ်ခု ဝင်ရောက်လာတယ်။ မနေ့က ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ မကုဋာရာမကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့ အခန်းထောင့်နားက နံနက်ခင်း ကိုယ်စီ ကိုယ့် ကော်ဖီလေးတွေ ယူဆောင်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဖျော်ရတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ အခန်း ကိုယ်စီက သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံစည်းရာ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ သူတို့နှင့် တွေ့ဆုံကြရင် ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲဒါလေးက ကျွန်တော် ခေါင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သဖြင့် စာရေးချင်တဲ့ စိတ်လေး ပေါ်လာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ဆုံနေကြ ဆုံစည်းရာလို့ ခေါ်သည့် မကုဋာရာမကျောင်းတိုက် ထောင့်နားက ကော်ဖီဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ ဆွေးနွေးမှုက လူ့ဘဝနေရတဲ့ အခိုက်အတန့် သာမန် လက်လုပ် လက်ကိုင်သမား ဘဝကရင် အောင်မြင် ကျော်ကြားလာသည့် ကမ္ဘာကျော်တွေ အကြောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ အောင်မြင်လာကြတာ တချို့က သူ့နည်း သူဟန် ရှိကြပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အခြေခံ လူတန်းစား ဘဝကရင် စတင်ပြီး စနစ်တကျ အောင်မြင်လာသူတွေကတော့ မရှိသလောက် ရှားပါးလွန်းလှပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းလို့ မေးခွန်းတွေ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့က သူတို့ ထင်မြင်ယူဆထားသည့် အတိုင်း တင်ပြကြတယ်။ တချို့က စာပေထဲကလာသည့်အတိုင်း ဆွေးနွေးတင်ပြကြတယ်။ ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်း အချက်အလက်တစ်ခု ဆွေးနွေးမှုထဲ ပါလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပို့တ် ရစ်မွန်က မထင်မရှား လူငယ်တစ်ယောက် အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးကို အလွန်နှစ်သက်လွန်းလို့ ကျွန်တော် သိသလောက်လေးတွေ တင်ပြ ရေးသားချင် ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်ခ်မြို့ စတိတ်တင်းကျွန်းထဲ ပို့စ် ရစ်မွန်မှာ ၂၇ ရက် မေလ ၁၇၉၄ ခုနှစ်မှာ သူ့ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ဆင်းရဲသော အသိုင်းဝိုင်းက မွေးဖွားလာသော သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူ့ လောကဓံ သူ့ဘဝထဲမှာ အခြေခံ စာသင်ကျောင်းကို ခဏတာ တက်ရောက်ရပေမဲ့ ဘဝအခြေအနေကြောင့် သူ့အသက် ၁၁နှစ်မှာ ပညာမသင်နိုင်တော့ပဲ စာမတက်သော သူ့ဖခင်ကို ကြည့်ရှုစောင့်မဖို့အတွက်နှင့် မိသားစု နေထိုင် စားသောက်ရေးနှင့် နေ့စဉ် ဖြေရှင်းရမည့် ဘဝပြဿနာများထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
သူသည် ကျောင်းထွက်လာပြီးသည့်နောက်တွင် သူ ကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်စားသော ပင်လယ်ထဲတွင် လှေလှော်သား တစ်ယောက်အနေနဲ့ စီးပွားရှာခဲ့သည်။ တကယ်လည်း သူသည် အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ လုပ်ကိုင်နေမြဲဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်ခ်မြို့နားက စတိတ်တင်း ကျွန်းကလေးမှ မန်ဟတ္တန်ကို လာလာသမျှ ကုန်ခြောက် ရောင်းကြသည့် ဈေးသည်တွေကို အကြို အပို့ လုပ်ရတဲ့ လှေထိုးသား တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဈေးသည်တွေကို နေ့တိုင်း အကြို အပို့ လုပ်ရသဖြင့် ဈေးသည်တွေက သူကို ခင်မင် ရင်းနှီးကြပါတယ်။
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 8:43 AM No comments:
နေ့စဉ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြသော လူသားတို့၏ ပလက်ဖောင်းတွင် အတက်မျိုးစုံ တက်သိနားလည်ကြသည့် ပညာရှင် လူငယ်များစွာ ရှိနေကြမည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် စာရေးသူ အနေဖြင့် လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍတစ်ခုကို ဆွေးနွေး တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ တိုးတက်နေသည့် အရာရာတိုင်းသည် (Social and Education) လူမှုရေးနှင့် ပညာရေးတွေကတဆင့် (Development) တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေကြာစေ့ အခွန်ခွါသလောက် မလွယ်ကူတဲ့ ပညာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်းကျင်မှာ တင်ပြစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ဖြင့် ကိုယ် သိသလောက် အကြောင်းအရာလေးတွေ ဆွဲထုတ်ပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်သစ် (New Generation) လူငယ်တွေ တစ်ခေတ်ပြီး တစ်ခေတ် သက္ကရာဇ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားပေမဲ့ တုန့်ပြန်မရှိ ပါးစပ်ပိတ် နားထောင်ရတဲ့ ပညာရေးနှင့် ပွင့်လင်းမှု မရှိတဲ့ လူမှုရေး ဝန်းကျင်ထဲ ကျင်လည်ခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့ရသည်မှာ အားလုံးက အသိပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို နေခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတိုင်းတာကို ကြည့်မယ်ဆိုလျှင် လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပညာရေး အခွင့်လမ်းတွေ နည်းလွန်းနေခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့အားလုံး လွတ်လပ်သော ပညာသင်ကြားခြင်းတွေ ဆုံးရှုံးသလို ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ယနေ့ တိုးတက်လာသည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောသည် လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး ပေါင်းစည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မစ္စတာလီရဲ့ စင်္ကာပူလို နိုင်ငံကို ကြည့်လျှင် ပို၍ သိသာသလို တောင်ကိုရီးယားလို နိုင်ငံမျိုးက ဒီနေ့ မြန်မာ့ တီဗွီတွေပေါ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ (Social Films or movies) တွေကို ကြည့်လျှင် သိသာ ထင်ရှားပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံ ဖောင်းဒေးရှင်း(န်) က နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေး အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ လူမှုရေးနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးတွေပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး လူမှုရေးဆိုတာကတော့ (Social means concerning or belonging to the way of life and welfare of people in community) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်သော အသိုင်းဝိုင်းအတွင်းက ဘ၀နေနည်း ထိုင်နည်း တရာမျှတခြင်းတွေ (Daily Social Problems) နေ့စဉ် လူမှုရေး ပြဿနာတွေ (Concerning the system by which suchacommunity is organized) လူတွေ စုဝေးဖွဲ့စည်ထားသည့် စနစ်နှင့်သက်ပတ်မှုတွေ (Social Class) လူမှုအဆင့်အတန်းတွေ (living in communities) အဖွဲ့အစည်းဖြင့် နေထိုင်မှုတွေ (A Social club) လူမှုရေး အသင်းတွေနှင့် ဘယ်လို အသိုင်းဝိုင်းနှင့် တွေ့ဆုံနေပါစေ အံဝင် ခွင်ကျ ဆက်ဆံနိုင်တာကို လူမှုရေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူသားအားလုံးတို့သည် (Human beings are social beings) လူမှုရေး အသိုင်းဝိုင်းထဲက လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကလည်း (That is, each one of us lives inacondition of interdependence within society.) လူမှုရေးဆိုင်ရာ အသိုင်းဝိုင်းအတွင်းက အခြေအနေတစ်ခု အနေနဲ့ မဖြစ်မနေ နေကြပါရတယ်။
ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောရလျှင် အမေရိကန် သမ္မတကြီး လင်ကွန်းပြောခဲ့သည့် စကားလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ "ရုံးခန်းထဲက လေညှင်းခံ ပန်ကာ အောက်မှာ ချည်း ထိုင်မနေနဲ့၊ အပြင်ထွက်ပြီး လူတွေကြားမှာ အမှန်တရားကို ရှာပါ။ လူတွေ အကြောင်း သိအောင် ကြီုးစားပါ။ အဲဒါမှ မိမိဌာနနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အမှန်အတိုင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်း ဖြစ်တယ်။"
လူမှုရေး နယ်ပယ်မှာ ကိုယ်က ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလျင် ကိုယ် ထိုင်နေသည့် ရုံးခန်းအတွင်းမှာ ဇိမ့်ခံမနေသင့်ပါ။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာသည့်အတိုင်း ကိုယ့် ဝန်းကျင်နှင့် ပြင်ပလောက လူတွေကြားမှာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးပါ။ လိုအပ်နေသည့် လူတွေ အကြောင်း သိအောင် ကြိုးစားပေးပါ။ အဲဒီက ရလာသည့် အဖြေဟာ မိမိဌာနနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို အမှန်အတိုင်း သိလာမည် ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာတွေသည် ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်သော အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လူမှုရေးနှင့် ပညာရေးတွေမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာသည့် အချက်အလက်တွေပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လူမှုရေးနှင့် ပညာရေးတို့ လမ်းကြောင်းပေါ်တက်လာလို့ ကိုယ်ပိုင် အသိပညာ အတက်ပညာ၏ အလင်းရောင် တောက်ပလာသည့် အခါ လူမှုရေး အသိုင်းဝိုင်းထဲ မဖြစ်မနေ ဝင်ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့် မာန်မာနတွေကို တတ်နိုင်လျှင် အနိမ့်ဆုံး သုည လျော့ချပြီး လူမှုရေး နယ်ပယ်မှာ ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပါမှ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပညာ မာန်မာန အသိုင်းဝိုင်း မာန်မာန စည်းစိမ် မာန်မာန စသည်တွေကို ကိုယ် သင်ခဲ့ဖူးသည့် လူ့ယဉ်ကျေးတွေ၏ အိပ်ယာထက်မှာ သင်္ဂြိုဟ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး နယ်ပယ်မှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလျှင်လည်း လူတစ်ယောက်ကို အမိန့်ပေး စေခိုင်းနေခြင်းထက် သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို ယူပြီး လုပ်ဆောင်လျှင် ပိုမိုထိရောက်သော တိုးတက်မှု တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ လူမှုရေး ဝန်းကျင်မှာ ပညာနှင့်ပတ်သက်၍ မြတ်စွာဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါ မှတ်သားဘွယ်ရာ စကားရပ်များကို မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ပညာသမာ အာဘာ နတ္ထိ (သံ၊၁၊၆၊ပါ)
လောက၌ ပညာနှင့်တူသော အလင်းရောင် မရှိ။
ပညာ နရာနံ ရတနံ (သံ၊၁၊၃၃၊ပါ)
စတ္တာရောမေ ဘိက္ခဝေ သြဘာသာ။ ကတမေ စတ္တာရော၊ စန္ဒောဘာသော သူရိယောဘာသော အဂ္ဂေါဘာသော ပညောဘာသော။ ဣမေ ခေါ ဘိက္ခဝေ စတ္တာရော သြဘာသာ။ ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခဝေ ဣမေသံ စတုန္နံ သြဘာသာနံ ယဒိဒံ ပညောဘာသော။ (အံ၊၁၊၄၅၇။)
ပရိသတ်လေးပါး အို ချစ်သားတို့... အလင်းရောင်တို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။ အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ --- လ အလင်းရောင်၊ နေအလင်းရောင်၊ မီးအလင်းရောင်၊ ပညာအလင်းရောင်တို့တည်း။ ပရိသတ်လေးပါး အို ချစ်သားတို့ ...အလင်းရောင်တို့သည် ဤလေးမျိုးတို့တည်း။ ချစ်သားတို့ ...ဤအလင်းရောင် လေးမျိုးတို့တွင် ပညာအလင်းရောင်သည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ပေ၏။ (အံ၊၁၊၄၅၇။)
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 3:51 PM No comments:
ဆုကဗျာ၏ Fancy Journal များကို အားပေးနိုင်ပါသည်
အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်းလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
စာပေမြတ်နိုးသူ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း
Ms. SU KA BYAR
Fancy Journal ( စိတ်ကူးစွမ်းအားဂျာနယ်)
NO. 32 , Room (5-A+ B) , Kyundaw Road,
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 12:36 AM No comments: